ओलीले चाले यस्तो कदम : हटाए प्रचण्डका ५७ र ज्ञानेन्द्रका ५० सुरक्षाकर्मी, अरु कसका कति फर्काइए ? « Bagmati Online
ओलीले चाले यस्तो कदम : हटाए प्रचण्डका ५७ र ज्ञानेन्द्रका ५० सुरक्षाकर्मी, अरु कसका कति फर्काइए ?
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको सुरक्षामा खटिएका करिब २ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको छ । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका गरी १३ वटा पछुवा गाडी र करिब २ सय जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको हो  । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि–२०७७ अनुसार पछुवा गाडी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र तथा उनको परिवारका सदस्यको सुरक्षामा खटिएका ५० जना सुरक्षाकर्मी र २ वटा पिकअप भ्यान फिर्ता गरेको छ  । पूर्वराजाको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी शिव राउतको कमान्डमा नागार्जुनमा ‘सशस्त्र प्रहरी नागार्जुन सुरक्षा बेस’ र निर्मल निवासमा राजेन्द्र गुरागाईंको कमान्डमा ‘क्लोज प्रोटेक्सन’ टिम खटिँदै आएको थियो । सशस्त्रले नागार्जुन बेस पूरै फिर्ता गरेको हो  । अब ज्ञानेन्द्र शाहसँग पछुवामा एउटा मात्रै पिकअप भ्यान हुनेछ  ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीका २६ र सशस्त्र प्रहरीका ३१ सुरक्षाकर्मी सरकारले फिर्ता गरेको छ । सँगै नेपाल प्रहरीको एउटा अगुवा गाडी पनि फिर्ता गरिएको छ । एकैपटक प्रचण्डका ५७ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको यो पहिलो पटक हो ।
अब पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु प्रचण्ड, माधब नेपाल र झलनाथ खनालले १६÷१६ जना शसस्त्र प्रहरी, २÷२ जना नेपाल प्रहरी र एक एक वटा पछुवा गाडी मात्रै पाउने छन् ।
यसैबीच पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सुरक्षामा खटिएका ३ र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सुरक्षामा खटिएका १ जना सशस्त्र प्रहरी फिर्ता भएका छन् । हालै पारित भएको कार्यविधिअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई सशस्त्र प्रहरीबाट पछुवा पिकअप भ्यान र १६ प्रहरी तथा अंगरक्षकका रूपमा २ जना नेपाल प्रहरी खटाइने उल्लेख छ  । देउवाले सशस्त्रका १९ र नेपालले १७ जना सुरक्षाकर्मी राखेका थिए ।
भीआईपीको सुरक्षा कटौती
१० जना पूर्वगृहमन्त्रीको सुरक्षाका लागि खटिएको पछुवा गाडी र सशस्त्रका सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन् । पूर्वगृहमन्त्रीहरू रामचन्द्र पौडेल, वामदेव गौतम, कमल थापा, विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का, कृष्णप्रसाद सिटौला, शक्ति बस्नेत, कृष्णबहादुर महरा, भीम बहादुर रावल, गोपालमान श्रेष्ठ र पूर्वउपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको सुरक्षामा खटिएका पछुवा गाडीसहित सबै सशस्त्र प्रहरी फिर्ता गरिएका छन्  । पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले भने सुरक्षाकर्मी फर्काउन बाँकी छ ।
पूर्वउपप्रधान र गृहमन्त्रीहरूलाई सुरक्षा थ्रेटका आधारमा नेपाल प्रहरीका जुनियर अधिकृत २ जनासम्म खटाइने छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द, डा. बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल र मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीको सुरक्षामा भने कार्यविधि अनुसार१६ जनाभन्दा कम जनशक्ति खटिएका कारण फिर्ता गरिएको छैन । सशस्त्रले यसरी व्यक्तिको सुरक्षाबाट फिर्ता भएका जनशक्ति तथा सवारीसाधनलाई सीमा सुरक्षामा परिचालन गर्ने भएको छ  ।